ခေါင်းဆောင်နဲ့ သူဌေး ခြားနားချက် - Myanmar Network
Posted by Kyawt K Khine on August 31, 2015 at 14:07 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
အလုပ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့အကြီးအကဲက ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်လား၊ သူဌေး တစ်ယောက်လားဆိုတာ အခုဖော်ပြမယ့် အချက်တွေက ခွဲခြားပေးပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်က ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဆိုရင် ကိုယ့် မှာ ဘယ်လိုအကြီးအကဲမျိုးရှိနေသလဲ။ ခေါင်းဆောင်နဲ့တူတဲ့ အကြီးအကဲလား၊ ဒါမှမဟုတ် သူဌေးနဲ့တူတဲ့ အကြီးအကဲ လားဆိုတာ အခုဖော်ပြမယ့် အချက်တွေက ခွဲခြားပေးပါလိမ့်မယ်။ ခေါင်းဆောင်နဲ့ သူဌေးမတူညီတဲ့ အကြီးမားဆုံး ကွာခြား ချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ။
ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ဝန် ထမ်းတွေအပေါ်မှာ မေတ္တာဂရုဏာကြီး မားတဲ့ အကြီးအကဲတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ အဲဒါနဲ့ ဆန့်ကျင်စွာပဲ သူဌေးဆိုတာက တော့ ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မှာ ခံစားမှုကင်းမဲ့တဲ့ လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်း ဆောင်တစ်ယောက်က ကိုယ့်ရဲ့ ဝန်ထမ်း တွေရဲ့ ပြောဆိုသံတွေ၊ လိုအပ်ချက်တွေ၊ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို နားလည် သဘောပေါက်တဲ့ လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူဌေးဆိုတာကတော့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အသံကိုလည်း နားမထောင်ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ အမြင်၊ ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုသာ ရှေ့တန်းတင် တတ်တဲ့ ရင်းနှီးဖော်ရွေမှုမရှိတဲ့ သူမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စကားလုံး အသုံးအနှုန်းမှုကွာခြားချက် အလုပ်မှာ အောင်မြင်မှုတစ်ခုခုရရှိ တဲ့အခါ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်က ‘ငါတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှု’လို့ သုံးနှုန်းတတ်ပြီး သူဌေးကတော့ ‘ငါ့ရဲ့ အောင်မြင်မှု’ လို့ သုံးနှုန်းတတ်တာက ခေါင်းဆောင်နဲ့ သူ ဌေးရဲ့ ကွာခြားတဲ့ အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါ တယ်။ ခေါင်းဆောင်ပီသတဲ့သူကတော့ ငါတို့ရဲ့ ကုမ္ပဏီ၊ ငါတို့ရဲ့ ကြိုးစားမှု၊ ငါတို့ ရဲ့ စွန့်စားမှုစသဖြင့် အောင်မြင်မှုတိုင်းမှာ အတူကြိုးစားခဲ့တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို အသိ အမှတ်ပြုပြောကြားလေ့ရှိပါတယ်။
သူဌေးတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ လက် အောက်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ပညာကို အသုံး ချဖို့သက်သက်သာတွေးပြီး ဝန်ထမ်းတစ် ယောက်ရဲ့ စွမ်းရည်တည်ဆောက်ဖို့ဆို တာကို လစ်လျူရှုထားတယ်။ ခေါင်း ဆောင်တစ်ယောက်ဆိုတာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ညီမျှတဲ့ သဘောထားခံယူချက်ရှိသူဖြစ် တယ်။ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်မှာရှိတဲ့ ပညာကို အသုံးပြုရုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ ဝန်ထမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် ကြိုးပမ်းတယ်။ အလုပ်ခွင်မှာ ဝန်ထမ်းတွေ ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ပေးတယ်။အဲဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်စေတာက ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအပေါ်ထားရှိတဲ့ စိတ်စေတ နာဖြစ်တယ်။ သူဌေးတွေမှာတော့ အဲဒီလို စိတ်စေတနာမတွေ့ရတတ်ဘူး။ ဝန်ထမ်း တွေရဲ့ ရှိသလောက်ဦးနှောက်ကိုသာအသုံး ချသွားတယ်။ အဲဒီဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေတဲ့ ဘယ်လိုအချက်မျိုးကိုမှ ခွင့်မပြုဘူး။
လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတာဝန်ပေးစေခိုင်း တဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ ဝန်ထမ်းကို အမိန့်ဆန် တဲ့ စကားလုံးကို သုံးစွဲတတ်သူက သူဌေး တွေရဲ့ အမူအကျင့်ပါ။ ‘မင်း ဒီအလုပ်ကို သွားလုပ်လိုက်စမ်း’ ‘မင်း ဒီကိစ္စကို လုပ်ကို လုပ်ရမယ်’ ‘သွားလိုက်စမ်း’ စတဲ့အသုံးအ နှုန်းတွေကို သူဌေးတွေက သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်း တွေအပေါ် သုံးနှုန်းတတ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ အကြီးအကဲကခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ အမိန့်အာဏာ ဆန်တဲ့ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေကြား ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခုခုကို တာဝန်ပေး ချင်တဲ့အခါမှာ ‘ငါတို့ ဒါကိုတော့ လုပ်သင့် တယ်’ ‘ဒီလိုတော့ ဖြစ်သင့်တယ်’ ‘ဒီကိစ္စ ကို အကောင်အထည်ဖော်ကြရအောင်’ စသဖြင့် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးတာဝန်ပေး တတ်တာက ခေါင်းဆောင်နဲ့ သူဌေးရဲ့ ကွာခြားချက်တွေထဲက တစ်ခုပါ။
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်က ကိုယ့် ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ လို့ သဘောထားတတ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်း ခွင်မှာ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ တသားထဲရှိနေ တတ်တာက ခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေပါ။ သူဌေးကတော့ အဲဒါနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် သဘောထားတတ်ပါတယ်။ သူဌေးတစ် ယောက်က သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ပိုက် ဆံပေးပြီး ခိုင်းစေလို့ရတဲ့သူတွေလို့ သဘောထားတာကြောင့် မောက်မာစွာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားလို သဘော ထားတတ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို အတူတွဲပြီး အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင် သူတွေလို့ သဘောမထားနိုင်ဘဲ ငွေပေးပြီး ခိုင်းလို့ရတဲ့သူတွေလို့ သဘောထားတတ် ပါတယ်။ ဒါက ဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာ သူဌေး နဲ့ ခေါင်းဆောင်ကွာခြားချက်တစ်ခုပါ။
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်က အလုပ် နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရေရှည်မျှော်မှန်းချက်၊ ရည် မှန်းချက်ထားရှိတတ်ကြပါတယ်။ ကုမ္ပဏီ ရဲ့ ရေရှည်အကျိုးစီးပွားအတွက် မျှော်မှန်း ပြီး လုပ်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်။ သူဌေး ကတော့ အဲဒီလိုသဘောထားမျိုးမရှိတတ် ကြပါဘူး။ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက်ဆို ရေ ရှည်ကိုမကြည့်ဘဲ ဆုံးဖြတ်တတ်ပါတယ်။ ရေတိုအမြင်ကိုပဲကြည့်ပြီး နောက်ထပ်ဘာ ဖြစ်ဖြစ် မစဉ်းစားတတ်ကြပါဘူး။
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ Customer တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ယုံကြည်မှုအမှတ်တံ ဆိပ်တစ်ခုကို ရယူနိုင်ဖို့ ကြိုးစားတာက ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေရဲ့ မူလရည်မှန်း ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဌေးကတော့ သူနဲ့ ဆန့်ကျင်စွာပဲ ရေတိုအကျိုးအမြတ်အ တွက် နာမည်ကောင်းကို သိပ်အလေး မထားတတ်ကြပါဘူး။ အရပ်စကားနဲ့ဆို တစ်နပ်စားဉာဏ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်းကို သိပ်အလေးအ နက်မထားဘဲ အကျိုးစီးပွားတစ်ခုတည်း ကိုသာ ကြည့်တတ်တာက သူဌေးနဲ့ ခေါင်း ဆောင်ရဲ့ အကြီးမားဆုံး ကွာခြားချက်ဖြစ် ပါတယ်။
စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ရင် ခေါင်း ဆောင်ဆိုသူတွေက ကိုယ့်ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ ကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ တာဝန်ခွဲဝေပေး လေ့ရှိပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်တွေက ဘယ် တော့မှ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေ ကို အသေးစိတ်ကအစ စီမံခန့်ခွဲတာမျိုး မလုပ်ဆောင်ပါဘူး။ သူဌေးတွေကတော့ ဝန်ထမ်းရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းကို အသေး စိတ်စီမံခန့်ခွဲတတ်တာကြောင့် အဖွဲ့လိုက် တိုးတက်မှုတွေ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေက အောင်မြင် မှုရှိသင့်သလောက် မရှိဘဲ ဆုံးရှုံးရတတ်ပါ တယ်။ အသေးစိတ်ကအစ လိုက်လံပြော ဆိုမှုတွေကြောင့် ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ တက်ြွက မှုတွေ ဆုံးရှုံးရသလို လုပ်ငန်ခွင်အတွင်းမှာ လည်း အောင်မြင်မှုနဲ့ ဝေးကွာသွားတတ် ပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကတော့ ဝန်ထမ်းအားလုံးကို သူ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့သူ တာဝန်ခွဲဝေပေးတယ်။ အသေးစိတ်ကအစ သူ ကိုယ်တိုင် စီမံခန့်ခွဲမှု မလုပ်ဘူး။ ဝန်ထမ်းတွေကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်။ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ကွာခြားချက် ကလည်း ခေါင်းဆောင်နဲ့ သူဌေးရဲ့ ကွာခြားချက်တွေထဲက အဓိကအရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။
Permalink Reply by Ohmar Htut on September 1, 2015 at 15:05
But some heads are only interested in their position not to loose. They also never consider about the staff's affair .
Permalink Reply by kaung san on September 4, 2015 at 7:49
Sorry I simply disagree this. I feel your write this based on opinions not on facts.
Permalink Reply by Phyu Zin on April 27, 2016 at 15:44
I agree with you. I feel so.
Permalink Reply by wai phyo on May 15, 2016 at 22:41
Permalink Reply by soesanmin on April 25, 2016 at 2:21